हाम्रा नेता र तिनका भारी – Kanak Mani Dixit
हिमाल खबरपत्रिका (१५-२१ फागुन, २०७३) बाट
तर कमजोरीलाई तुलनात्मक ऐनामा हेर्नुपर्छ, नत्र आश मर्दछ। नेपालका नेताहरूले सामना गर्नुपरेको चुनौतीको पहाड पनि बुझौं। राजासँग दशकौं लडेपछि पाँच वर्ष मात्र निष्फिक्री लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न पाए, अनि त कहालीलाग्दो ‘जनयुद्ध’ काल, संविधान बनाउने संक्रमणकाल, त्यसपछि संविधान बनेपछिको संक्रमण। निरन्तर विदेशी र विशेषगरी भारतीय हस्तक्षेप झेल्नुपरेको छ। कहिले खिलराज उदाउँछन्, कहिले लोकमान।
नागरिक समाजका कतिपय सदस्य भने हरबखत नयाँ पार्टी खोल्न तम्तयार। केही नागरिक अगुवा ‘मुलुक यत्ति बिग्रियोस् कि अनि मेरो पालो आउला’ भन्दै कुरी नबसेका होइनन्। ती मुखछाडा अगुवा जसको भनाइमा स्थिरता छैन, अवसरवादले लिप्त, सदैव ‘एटेन्शन’ आफूमा केन्द्रित गर्न खोज्ने, जल्दाबल्दा मुद्दामा ‘पोजिशन’ भने नलिने, लोकरिझ्याइँ गर्दै पत्रकार र सर्वसाधारणलाई मक्ख पार्नेलाई ‘र्‍यान्डम्’ नेतासँग दाँजी हेरौंत। मेरो लख यो हुन्छ कि नेता–अगुवा दुईथरीको स्तरमा धेरै माथि तल पाउने छैनौं।
बल्लबल्ल निर्वाचन उन्मुख हाम्रो मुलुकमा अब नेताहरूतर्फको हीनताबोध त्याग्ने बेला आयो। एउटा ‘नयाँ शक्ति’ देखाउने पार्टी आउला भन्ने थियो कसै कसैलाई, तर मतदाताबाट परीक्षणको यस्तो मौकालाई उसले उपयोग नगर्ने लाचारी देखायो। मधेशी मोर्चाका घटकहरूलाई निर्वाचनमा सरिक बनाउन के कति गर्न सक्छन्, तीन ठूला दलले गरुन्।
बाङ्लादेश त एकदलीय प्रणालीमा प्रवेश गरिसक्यो । शेख हसिनाको अवामी लिग खालिदा जिया र उनको दल बीएनपीको नामोनिशान मेटाउने तरखरमा छ। सामाजिक–राजनीतिक अवस्था जर्जर छ, जसको संकेत हो– ब्लगमा स्वतन्त्र विचार राख्ने व्यक्तिमाथिको धार्मिक अतिवादीद्वारा सांघातिक आक्रमण र हत्या। म्यानमारमा त्यत्रो ख्याति कमाएकी आङ साङ सुची ‘राजनेता’ वा ‘स्टेट्स–वुमन’ बाट साधारण नेताको पंक्तिमा झरेकी छन्, उत्तरपूर्वी रखाइन् प्रान्तका रोहिंग्या मुसलमानहरूलाई अमानवीय विस्थापनतर्फ धकेलेर।
तुलनात्मक हिसाबले हेर्दा नेपालमा शान्ति छाएको छ, द्वन्द्वकालको पाठ पनि सिकिएको छ। र, माओवादीको ‘डेमागगी’ आचरणलाई त मत्थर पार्न सफल भएको छ भने यसको श्रेय किन नलिने? पहिलो श्रेय दिऊँ जनतालाई; हिमाल, पहाड र तराई–मधेशका, जसले भड्काउमा पर्न चाहेनन्, परेनन्। श्रेय दिऊँ हाम्रा राजनीतिज्ञहरूलाई थुप्रै आरोप र आलोचनाका बाबजूद। यसरी नेपाल शान्त बन्न पुग्यो, र धुकधुकी नै किन नहोस् लोकतन्त्र चलायमान छ।
अर्को तरीकाले पनि हेरौं। आज संसारमा खाँट्टी कम्युनिष्ट अधिनायकवाद तथा दक्षिणपन्थी ‘डेमागग’को विगविगी छ। यी दुईथरीको वस्तुगत रणनीति र कार्यशैलीमा धेरै फरक छैन। बेइजिङमा विराजमान सी जिनपिङ त महाचीनको सर्वव्यापी अटोक्र्याट भइहाले, रूसका भ्लादिमिर पुटिन, टर्कीका रेचेप एर्दोगान्, फिलिपिन्सका रोड्रिगो दुतर्ते र भारतका नरेन्द्र मोदी दक्षिणपन्थ डेमागग हुन्, र यिनमाथि हिंसा प्रयोगको आरोप लागेको छ।
यी नेतामध्ये कति त ‘डाइनामिक’ पनि होलान्― ‘प्रोपोगाण्डा’ प्रयोगमा सिपालु, गुप्तचर प्रयोगमा ‘सफल’, ढाँट्न माहिर; तर हामीलाई त त्यता जानु नै छैन। तसर्थ, आफ्नो चश्मामा रहेको धूलो–दाग पुछौं र हाम्रा नेतालाई फेरि एकपटक नियालौं। अब स्थानीय निर्वाचनद्वारा फेरि मुलुकभर लोकतन्त्र पुनर्जागरण गर्ने हो, र यसका साथ जन्माउने हजारौं हजार भोलिका नेता।
Who is the Madhesi subaltern?
विवाद हल गरिदेऊ